Realme XT: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
Realme XT: 64MP Igwefoto Mbụ
Izu ole na ole gara aga, Realme mara ọkwa na ha ga-aga hapụ ekwentị igwefoto 64 MP. Ọ ga-abụ n'ụzọ mbụ a, na-ebute ụzọ na Redmi Note 8 nke ewepụtara na awa ole na ole. N'ikpeazụ, ihe nlereanya a emeelarị ka enyere gị aka na ihe omume na China. Nke a bụ Realme XT.
Recentlydị a megharịrị etiti ya n'oge na-adịbeghị anya ma ugbu a, ha hapụrụ anyị a ekwentị n'ime ya adịchaghị ufọt ufọt nso. Realme XT a ruru akụkụ na-eto eto, ebe igwefoto ya bụ ebe siri ike, yana mmewere nke na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị na ahịa.
Banyere nhazi ya, anyị nwere ike ịhụ na ọ hapụghị anyị ọtụtụ ihe ịtụnanya. Bet nzọ na ihuenyo na notch, nke nwere ọdịdị oval na nke a, nke na-enye ohere ka ihu ngebichi nwere okpokolo agba, jiri ohere dị n'ihu mee ihe n'ụzọ dị mma. Na azụ ya anyị hụrụ igwefoto anọ na ngụkọta na nke a na ekwentị.
Realme zigara 10 nde ekwentị zuru ụwa ọnụ naanị ọnwa 14
1 Nkọwa Realme XT
Nkọwa Realme XT
Na teknụzụ ọkwa anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ekwentị na-abịa n'ime ika si adịchaghị ufọt ufọt nso. E gosipụtara ya dị ka ihe nlereanya nke ga-enye ezigbo arụmọrụ n'ozuzu ya. Agbanyeghị ese foto bụ ihe kachasị apụta na Realme XT a, n'ihi ihe mmetụta 64 MP ha na-eji, si otú ahụ bụrụ akara izizi na gam akporo iji jiri ya. Ya mere, anyị na-ele anya ịhụ ihe igwefoto ndị a ga-enwe ike. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,4-inch IPS LCD na mkpebi Full HD +
Nchekwa ime: 64/128 GB
Igwefoto na-abịa: 64 MP nwere oghere f / 1.4 + 8 MP nwere oghere f / 2.25 + 2 MP + 2 MP
Igwe n'ihu: 16 MP nwere oghere f / 2.0
Batrị: 4.000 mAh na ụgwọ ngwa ngwa (20W)
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9 achịcha na agba agba OS
Njikọta: 4G / LTE, Bluetooth, GPS, GLONASS, SIM abụọ, USB
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru enyo
Akụkụ: 157 x 74,2 x 8,9 mm.
Arọ: gram 184
Obi abụọ adịghị ya, ihe mmetụta 64 MP ya bụ ihe dị mma. Realme XT jiri ihe mmetụta 64MP ISOCELL nke Samsung, nke e gosipụtara n’ihu izu ole na ole gara aga. Thedị ndị China na-achịkwa Xiaomi, maka otu ụbọchị, wee hapụ anyị ekwentị mbụ nke na-eji ihe mmetụta a eme ihe. Ọ gaghị abụ nke ikpeazụ, n'ihi na anyị na-eche ihu ihe mmetụta nke na-ekwe nkwa ịbụ onye kachasị ewu ewu na ahịa na ọnwa ndị a na-abịanụ.
Banyere processor, A na-eji Snapdragon 712, otu n'ime ndị nhazi nke ụlọ ọrụ America na ọkwa ya kachasị elu. Ọ na-abịa na ọtụtụ RAM na njikọta nchekwa ịhọrọ. Batrị ekwentị nwere ikike nke 4.000 mAh, na mgbakwunye na ịnwe nkwado maka ịkwanye ngwa ngwa. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị n'okpuru ihuenyo, nke bụ ihe anyị na-ahụ ugboro ugboro na ekwentị ndị dị ugbu a.
Realme XT- Isi mmalite: Androidcentral
On a ekwentị a na-aga na-oru na-echekwa anyị nwere obere nkọwa na oge. Ekwenyela na Realme XT a ga-oru na September na-echekwa. Ihe a ka ụlọ ọrụ kwuru ugbu a. E nyeghi ụbọchị ọ bụla akọwapụtara ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla banyere ọnụahịa ahụ. Agbanyeghi na enwere ike inwe ezigbo nkowa maka nka.
Ebe ọ bụ na a ga-enye Redmi Note 8 na awa ole na ole, etiti ọhụụ ọhụrụ, nke ga-ejikwa ihe mmetụta 64 MP a. Ya mere, o yikarịrị ka ụlọ ọrụ ahụ ọ ga-echere ịhụ ọnụahịa nke Xiaomi setịpụrụ na ekwentị ọhụrụ a, ka mgbe ahụ chọpụta ọnụahịa ikpeazụ na Realme XT a aga enwe ya na ahia. O yikarịrị ka ụbọchị ole na ole anyị ga-emesị nweta data niile gbasara mmalite ya n'ahịa.
Ọ bụ ya mere, anyị ga-ege ntị na akụkọ banyere Realme XT a. Maka ugbu a, anyị nwere ike ịmeworị ọbịbịa nke ekwentị igwefoto 64 MP mbụ na ahịa. O doro anya na, ihe dị mkpa a na ubi a na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme XT: 64MP Igwefoto Mbụ
The Galaxy M30s ga-abata na nnukwu batrị
United States mechara nata ZTE Axon 10 Pro 5G na gọọmentị